Maxaad Ka Taqanaa Dadka Soomaalida? |
Aqoon GuudDhaqanka, Afka Hooyo, Taariikhda Soomaaliya & DuniddaMaqal & Muuqaal
Cabdijabaar Sh. Axmed — December 9, 2015
Soomaalida waa dad ku nool Geeska Afrika Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Waxayna ku hadlaan Af-Soomaali Waana mid kamid ah Luqadaha Kushitiga Faraceeda Afro Aasiya. Soomaalida Waxaa kala qaybiyey Gumeysigii qarnigii 19aad, kaas oo ukala qaybsaday 5 qaybood oo Kala ah:
TalyaaniOo haystay Koofurta Soomaaliya
IngriiskaOo haystay Wuqooyiga Soomaaliya (Somalilan)
FaransiiskaOo haystay Xeebta Soomaaliya (Jabuuti)
Itoobiyaiyo Ingiriiska Oo haystay Soomaali Galbeed (Soomaali galbeed)
Kenyaiyo Ingiriiska Oo Haystay NFD
Waxay wada leeyihiin dhaqan iyo af ay wadaagaan. Somalida, waxayna ku kala nool yihiin, qurbaha iyo dhulka Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliweyn . Soomaalida badankooda waa dad reer guuraah ah, waxaana lagu yaqaanaa, xoolo dhaqasho, sida ariga iyo geela iyo Lo’da. Soomaalida waxay ahaayeen dad ku dagaalama daaqqa xoolaha iyo Biyah ama si kale hadaan u dhigo waxan aan odhan karna baad iyo biyo.
Dadka soomaaliyeed waxaa dibadda uhaajiray ku dhowaadb ilaa iyo 5 Malyan. maadaamaa dalku ku jiray in kabadan 20 sano oo dagaal ah, Dhanka Diinta Soomaaliya waxaa aad awood ugu leh suufinimada, suufiyada Soomaali xoogaa waa ka duwan yihiin suufiyada dalalka qaarkood inkastoo ay aqoonta diintuu ay sii yaraanayso .
Waayadii horre markii ay Soomaaliya nabad ahayd waxaa Jiri jiray iskuulado iyo jaamacado badan ayaa ku yaalay dalka Soomaaliya. Dhaqaalaha dalkana kor ayuu u socday. Somalida waxay ganacsi la lahaayeen wadamada Carabta iyo Aasiya iyo Yurub. Dagaaladi Soomaaliya siday u bilaabmeen, waxaa dhacday in ay Soomaalidu isku dilaan qabiil dartiis iyo is fahmi la aan. Maanta Soomaalida dhibaato ayay ku sugan yihiin meelkasto ay joogaan.
Waxaana keenay dulmiga ay ayaguu isku gaysteen Soomaalida boqolkiiba 30 waa qaxooti oo wadamada kaley ku kalla noolyihiin. Waxayna u badan yihiin wadamada Itoobiya, Kiinya, Jabuuti, kanada, Mareykanka, Iswiidhan, Denmark, Finland, Jarmalka, Talyaaniga, Shiinaha, Noorway iyo wadamo kale oo aan la tiri Karin.
Khubarada ku xeeldheer Taariikhda dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in erega Soomaaliya uu ka taaganyahay labo eray oo la’isku geeyay, kuwaasi oo kala ah (Soo–Maal), iyadoo eraga (Soo) macnihiisa loola jeedo Soco, halka ereyga (Maal) uu macnihiisu ka soo jeedo Lis. Marka labadaasi eray la’isku daro waxaa uu noqonayaa (Soo Maal Saca, rida, laxda, geela). Khubarada qaarkood waxa ay sheegaan in magaca Soomaali uu asal ahaan ka soo jeedo ereyga carabiga ee ah (Duu-maa)( ذو مال) oo macna ahaan la macna ah Shacab xoolo badan leh.
Sooyaalka taariikhda qadiimiga ah waxaa iyadana laga helayaa macno kale iyadoo khubaraduna ku doodayaan in ereygaasi uu ka yimid Samaale oo micnihiisu yahay ninkii waranka Dheeraa. Samaale ayaa la sheegaa in uu ahaa ab iyo waziirkii ay ka soo farcanmeen dadka Soomaaliyeed (Aw-Samaale). Taariikh ahaan dalku waxa uu lahaan jiray xadaarad facween waxaana dalka loo aqoon jiray magacyo badan sida Dhulkii udgoonaa , Dhulkii eebe iyo Geeska Afrika.
Next post R/wasaaraha Oo Xariga Ka Jaray Xarunta Wasaaradda Batroolka Iyo Macdanta
Previous post In La Dhiso Tayada Ciidan Ee Dalka Uu Leeyahay Waa Laga Maar-maan